Saaxiibada Caalamka waxay ku boorinayaan xalinta
Muqdisho, 12 Janaayo 2021 – Saaxiibada Soomaaliya ee caalamka* waxay si aad ah uga walaacsan yihiin sii socoshada cakiran ee hirgelinta qaabkii doorashada ee ay ku heshiiyeen 17-kii Sebtember Hogaamiyaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo hoggaamiyeyaasha Dowlad Goboleedyada Xubnaha ka ah Dowladda Federaalka.
Waxaan ka codsaneynaa daneeyayaasha ugu sareeya siyaasada Soomaaliya inay muujiyaan hogaamin wanagsan iyaga oo eegaya danta umadda iyo in si deg deg ah loogu xaliyo arimaha harsan ee hirgelinta wada hadal iyo isu tanaasul, si hanaan doorasho oo lagu kalsoonaan karo ay u hergasho sida ugu dhakhsaha badan.
Saxiibadaha soomaaliya* waxay qadarinayaan dadaallada dhowaanahan socda. Gaar ahaan, waxay soo dhaweynayaan booqashadii ra’iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ee Galmudug iyo Puntland; wada hadaladii dhex maray madax badan oo Soomaali ah oo uu martigaliyay madaxweynaha Puntland Saciid Deni; iyo wacyigelinta Hogaamiyaha Galmudug Axmed Cabdi Kariye ‘Qor Qor,’ oo u gudbiyey soo jeedin ka timid hogaamiyayaasha Dawladda Federaalka ee Soomaaliya iyo dadka kale ee siyaasadda.
Saaxiibada caalamku* waxay xusayaan in Heshiiskii Sebtember 17 ay taageereen Dowladda Federaalka, dhammaan Dowladaha xubnaha ka ah Federaalka iyo labada aqal ee Baarlamaanka, waxaana sidoo kale soo dhoweeyey dad badan oo doonaya Hogaamiin wanaagsan.
Si kasta oo ay u niyad jabeen wada-hawlgalayaasha iyo dad badan oo Soomaaliyeed in qaabkani aad uga hooseeyo doorashooyinka ‘hal qof, iyo hal cod’, haddana heshiiskii Sebtember 17 ayaa weli ah aasaaska keliya ee la aqbali karo ee doorashooyinka 2021.
Maxaa looga baahan yahay kulanku wuxuu kuxiranyahay dhexmaraynQoor iyo…
Ma jiri karo dib-u-furid Heshiiskii 17-kii Sebtember ama abuuritaanka qaab kale ama is-barbar socda. Faham ballaaran oo loo dhan yahay oo ku saabsan hirgelintiisa ayaa loo baahan yahay si loo hubiyo kalsoonida geeddi-socodkan.
Tani waxay la jaanqaadi doontaa ballanqaadkii lagu heshiiyay ee ka yimid Madasha Iskaashiga Soomaaliyeed. Saaxiibada caalamku waxay soo dhaweynayaan dadaallada degdegga ah ee lagu xallinayo, sida ugu dhakhsaha badan, arrimaha haray iyo in la soo gabagabeeyo fahamka noocan oo kale ah maalmaha soo socda, si ay doorashadu u bilaabato dabayaaqada bishan.
Saaxiibada caalamku* waxay ku boorrinayaan hoggaamiyeyaasha Soomaaliya inay xushmeeyaan oo ay si buuxda u hirgeliyaan qoondada haweenka ee boqolkiiba 30ka ah ee baarlamaanka, sidii lagu saxiixay heshiiskii Sebtember 17.
Saaxiibada caalamku* waxay mar kale ku celinayaan in khatar kasta ama adeegsi rabshad aan la aqbali karin. Waxay sidoo kale carabka ku adkeeyaan ahmiyada ay leedahay in la helo goob siyaasadeed oo xor ah oo furan taas oo musharixiinta ay awoodaan inay si nabad ah ku soo bandhigaan aragtidooda isla markaana ay warbaahintu awood u leedahay inay ku shaqeyso bilaa xayiraad.
Wada hadalka iyo isu tanaasulka Dhab ah ayaa horseeday in la saxiixo heshiiskii Sebtember 17 waa in la dhaqan galiyo si howlaha doorashada horay loogu sii wado.
* Howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya (AMISOM), Belgium, Canada, Denmark, Masar, Itoobiya, Midowga Yurub, Faransiiska, Jarmalka, Urur-Goboleedka IGAD, Talyaaniga, Ireland, Norway, Sweden, Switzerland, Turkiga, Boqortooyada Ingiriiska, Mareykanka, iyo Qaramada Midoobay.
axadle 6203 posts
Ka Ogow 5 qodob Shirka Jaraa’id & RW Rooble –